Wallabag: Codsi is-martigelin oo furan oo furan si loo badbaadiyo bogagga internetka | Laga soo bilaabo Linux
Maanta, waxaan ka hadli doonaa a barnaamijka isha furan taas ayaa inaga hortaagan adeegsiga akhriska barnaamijyada lahaansho, xiran iyo ganacsi, ama bilaash iyo freemium, sida Instapaper, Pocket, Memex and Polar. Waana tan Wallabag, hal is-martigelinta codsiga PHP.
Sidaa darteed Wallabag waa codsi aan ku rakibi karno kaligeen ama qof kale serverkiisa, oo na siiya adeeg la mid ah codsiyada kor lagu soo sheegay, qaab u saamaxaya maamulkiisa inuu maareeyo qabashada qoraallada bogagga shabakadda la doonayo, akhriska dambe, qaab shaqsiyeed iyo sifiican.
Maaha markii ugu horeysay ee aan ka hadalno Wallabag ku qoran Blog-ka. Markii ugu horreysay waxay ahayd in ka badan 4 sano ka hor, qoraalkeennii hore oo la yiraahdo "Ku rakibidda Wallabag VPS", oo aan kugu martiqaadeyno inaad dib u eegto kadib markaad tan dhammayso.
1 Wallabag: Codsi iskiis ah oo loo soo diro PHP
Wallabag: Codsi iskiis ah oo loo soo diro PHP
Sidaad sheegtay goobta rasmiga ah ee GitHub , waxaa lagu sifeeyaa:
"Codsi is-martigelin ah oo lagu badbaadinayo bogagga shabakadda: Badbaadi oo kala saar maqaallada. Mar dambe akhriso. Xoriyad dhan".
Halka, uu ku jiro goobta rasmiga ah Waxaa lagu tilmaamay:
"Codsi aad u adeegsan karto kombuyuutarkaaga, taas oo ay ugu wacan tahay websaydhkeeda. Laakiin sidoo kale waad qaadan kartaa oo isticmaali kartaa Wallabag meel kasta. Tusaale ahaan, waad keydin kartaa maqaal ku saabsan laptop-kaaga shaqada, bilaabi inaad ku akhrido taleefankaaga casriga ah ee tareenka dhulka hoostiisa mara, kuna dhammeyso akhriskiisa laptop-kaaga sariirta.".
Oo uu ku jiro websaydhka ku yaal Android Waxaa lagu tilmaamay:
"App-akhris kadib. Taasi waxay kaga duwan tahay adeegyada kale, waa il furan oo furan. Waxaa loo sameeyay si aad u aqriso oo aad u xajisato maqaalladaada si raaxo leh. Waxaad ka soo dejisan kartaa wallabag.org oo aad raacdaa tilmaamaha si aad ugu rakibto server-kaaga, ama waxaad si toos ah uga diiwaan gelin kartaa wallabag.it. Codsigan android wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aqriso oo aad maareyso maqaalladaada isla markaana aad si toos ah ula waafajiso serverka wallabag".
Wallabag Waxaa si joogto ah loo cusbooneysiiyay tan iyo markii la abuuray, markaa waqtigan xaadirka ah astaamaha ugu caansan waa:
Waxay bixisaa akhris raaxo lehSababtoo ah waxay soo saartaa nuxurka maqaalka, kaliya nuxurka, waxayna ku soo bandhigtaa qaab ku habboon oo la arki karo.
Kuu ogolaanayaa inaad u haajiraan waxyaabaha lagu marti galiyay adeegyada kale: Sida jeebka, akhrinta, Instapaper ama sabuuradda.
Waxay bixisaa API wax ku ool ah oo fudud: Si ay dadka wax dhisa ay ugu xirmaan barnaamijyadooda u gaarka ah barnaamijkooda Wallabag.
Waxay taageertaa akhristayaal badan oo RSS ah / kuwa isu geeya quudinta: Kuwaas oo aan ka xusi karno: Miniflux, Vienna RSS, FreshRSS, Tiny Tiny RSS, Leed, Feed Reader and Feery Feeds.
Waxaana xusid mudan taas Wallabag, sidoo kale waa codsi ay taageerayaan Yunohost, taas oo lagu xaqiijin karo waxyaabaha soo socda isku xirka. Hadaadan ogayn Yunohost, waxaan kugu martiqaadeynaa dhamaadka daabacaadan si aad u aqriso daabacaadayada la xiriira ee ku saabsan. Ugu dambeyntii, gudaha wallabag.it si toos ah u soo bandhig isticmaalkooda, taas oo noqon karta maxkamad bilaash ah 14 maalmood iyada oo aan xad lahayn.
Rakiibideedu runtii waa wax fudud, waana dukumeentiyo Way fiicantahay waana fududahay in la fahmo, inkasta oo hada aan loo turjumin Isbaanish, kaliya Ingiriis, Faransiis, Jarmal iyo Talyaani. Si aad u fuliso rakibaadda, raac talaabooyinka fudud ee lagu sharaxay waxyaabaha soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan is-martigelinta codsiga PHP ee loo yaqaan «Wallabag», taas oo dad badani u tixgeliyaan inay tahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee furan Pocket, tan iyo, waxay u oggolaaneysaa in lagu keydiyo wixii akhrin ama maqaal ah ee adeegeena gaarka ah oo na siinaya awood ku saabsan waxyaabaha; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wallabag: Codsi is-martigelin oo furan oo furan si loo badbaadiyo bogagga internetka